Isikhombi se-Nucleic acid
Ithuluzi lokukhipha i-nucleic acid elizenzakalelayo lisuselwa kunqubo yokukhipha okuzenzakalelayo yokwehlukanisa ubuhlalu be-magnetic bead, engakunqoba kahle ukushiyeka kwendlela yendabuko yokukhipha i-nucleic acid, futhi ibone ukulungiswa okusheshayo nokusheshayo kwamasampuli ayi-1-96 ngasikhathi. Nge-reagent ye-nucleic acid ehambisanayo, ingacubungula izinhlobo ezahlukahlukene zesampula njenge-serum, i-plasma, igazi lonke, i-swab, isitulo, izicubu, isigaba sikapharafini, amabhaktheriya, isikhunta, njll. Kungasetshenziswa ekuvikeleni nasekulawuleni izifo, ukuhlukaniswa kwezilwane, ukuxilongwa ngemitholampilo, ukuhlolwa kokuphuma kanye nokuhlukaniswa nokuhlukaniswa, ukuphathwa kokudla nezidakamizwa, umuthi we-forensic, ukufundisa nocwaningo lwesayensi neminye imikhakha.
Ukusebenza kahle okuphezulu: ukusebenza ngokugcwele kobuchwepheshe bamagnetic nobukhulu be-amplitude, kungabhekana kalula nazo zonke izinhlobo zobuhlalu obuncane bamagnetic, ukufezekisa kalula ukukhishwa kwe-nucleic acid ngaphandle kodonga lokulenga lwensalela.
Ukuphepha: ukusetshenziswa kwesikebhe sesikhathi esisodwa sokukhipha kanye nesibani sokuvala inzalo kungagwema ukungcoliswa kwe-aerosol kusuka kumaqoqo ahlukahlukene futhi kunciphise ubungozi bokusebenza.
Okukhaliphile: Idizayini ye-UI design control panel ehlukile, ingaba umbukiso wesikhathi esisodwa wamapharamitha wokusebenza, okuqondakala kalula nokusebenza.
Ukumiswa: izinhlelo eziningi ezisebenzayo zingahlelwa ngokwesidingo, futhi zinenhlamvu enkulu yokugcina ukuqinisekisa ubunye bezimo zokuhlola.
Ukusebenza okuzenzakalelayo, okuphezulu kakhulu: i-nucleic acid extraction experiment automation, ukucubungula isikhathi esisodwa kwamasampuli ayi-1-96, ukucubungula isivinini se-nucleic acid izikhathi ezingama-4-5 zokukhishwa okukodwa
Ama-reagents asekelayo ochwepheshe: ngamandla oxhaso lobuchwepheshe, ukuze ukuhlolwa komsebenzisi kube lula futhi kube lula.
Ukuvulwa kwe-Reagent: Ngaphandle kwe-Corbition reagent yezokwelapha, ingakwazi ukuphatha zonke izinhlobo zamagesi kazibuthe wobuhlalu we-nucleic acid emakethe
Imininingwane I-CBX32 Nucleic Acid Extractor
Amandla wesampula 1-32
Ivolumu Yesampula 50-1000 uL
I-Elution Volume > 95%
Isikhathi sokukhipha 30 ~ 60 amaminithi
Cover Temperature ububanzi 25 kuye ku-50 ℃
Plate Uhlobo 96 ipuleti lomthombo ojulile
Uhlobo lwe-Reagent Vula ipulatifomu
Ithempelesha yokusebenza I-CV <= 3%
Ukucubungula Ukuphathwa Isakhiwo esisha, ukuhlela, ukususa
Icubungula Inombolo Yokonga Ukucutshungulwa kwesakhiwo, amasethi angama-20 ukuhlela amakhasimende
UV Ukukhanyisa Yebo
Ubukhulu 400 * 420 * 440mm
Ukunikezwa kwamandla kagesi AC 110V-240V, 50Hz / 60Hz, 750W
Imininingwane Isikhiphi se-M33 Nucleic Acid
Amandla wesampula 1-33
Olandelayo: 16 RT-PCR
I-CBX32 Nucleic Acid Extractor
I-CBX48 Nucleic Acid Extractor Isikhombi se-Nucleic acid